35ml Foundation 35000.0 Ks
နိုင်ငံကျော် မိတ်ကပ်ခင်စန်းဝင်းကိုယ်တိုင် Koreaနိုင်ငံတွင် အပ်နှံထုတ်လုပ်ထားသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ မိတ်ကပ်အလှကုန်များဖြစ်ပါသည်. မြန်မာပြည်အသားအရေနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်အောင် နိုင်ငံကျော် မိတ်ကပ်ခင်စန်းဝင်းကိုယ်တိုင် တီထွင်ဖော်စပ်ထားတဲ့ KSW Beauty Custard Creamy Foundation & Sheer Silk Setting Powder Professional Makeup Artist တစ်ယောက်လိမ်းပေးလိုက်သလို လှပတဲ့ မိတ်ကပ်အပြင်အဆင်ကို ကိုယ်တိုင်လိမ်းခြယ်နိုင်အောင် ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ် တနေကုန်စွဲမြဲပြီး လှပမှုတွေ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်. အလွယ်တကူပွတ်ဆွဲလို့ လွယ်ကူပြီး အနည်းငယ်လိမ်းရုံနဲ့ ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်အလှမျိုးရရှိနိုင်ပါတယ် ပေါင်ဒါသားလေးဆိုရင်လည်း ပါးလွှာစွာနဲ့ ဖုံးအုပ်ပေးထားတဲ့အတွက် မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ လေးလံနေခြင်းမရှိပါဘူး ကိုရီးယားမလေးတွေလို ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးကြိုက်ရင်တော့ Winter Moonlight ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ သဘာဝဆန်ဆန်လိမ်းထားမှန်းမသိသာအောင် လှနေချင်ရင်တော့ Autumn Sunrise ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးမဖြစ်ချင်ဘူး သဘာဝဆန်တာထက်လည်း ပိုလှချင်ရင်တော့ Autumn Sunrise Make up လေးလိမ်းပြီး Winter Moonlight Powder လေး သုံးလိုက်ပါ ဒါမှမဟုတ် Winter Moonlight Make up လေးလိမ်းပြီး Autumn Sunrise Powder လေးသုံးကြည့်လိုက်ပါ တစ်ခါတစ်ရံ ဆန့်ကျင်ဖက်တွေက ပိုမိုပြီး အစွမ်းထက်စေပါတယ် အသားဖြူသောသူများအတွက် မိတ်ကပ်အဖြူ Winter Moonlight Custrad Creamy Foundation 35ml 35000 Kyats အသားညိုသောသူများအတွက် မိတ်ကပ်အဝါ Autumn Sunrise Custard Creamy Foundation 35ml 35000 Kyats အသားဖြူသောသူများအတွက် ပေါင်ဒါအဖြူ Winter Moonlight Sheer Silk Setting Powder 30g 35000 Kyats အသားညိုသောသူများအတွက် ပေါင်ဒါအဝါ Autumn Sunrise Sheer Silk Setting Powder 30g 35000 Kyats
Ma Aye Mar Oo
Beaute Coffe သောက်ရအောင် 0%Cholesterol(သကြားလုံးဝမပါဘူး) အန္တာရာယ်ကင်းလှ အဆီကျ ကော်ဖီသောက်ပြီး ကျန်းမာရေးကောင်း ရင်တုန်း ကင်းဝေး Beaute Cofe လေး အပူသောက်မလား ၊အအေးသောက်မလား နှစ်မျိုးလုံးရ 1ပါကင် -1500 Made in Thailand Beaute Cofe Focus Beauty Product 09777853957